RAW: Miz oo Loo Diray Smack down live – Filimside.net
RAW: Miz oo Loo Diray Smack down live
Miz ayaa xalay qabanaya showgiisa Miz tv oo loogu bartay inuu qof ku marti qaado . ka dib waxa uu shaacinaya martidiisa oo ah oo uu dhahayo xidigaha cusub ee raw Kevin Owens iyo Sami zayn oo ka yimaadayn Smack down live iyagoo imaanaya ringaha lana dabaal dagayaan miz iyo miz tourage.
Laakiin waxaa goobta imaanaya Kurt angle isagoo sheegaya in sami zayn iyo kevin owens oo isaga dooranin oo sidee ku imaadayn goobta.
Laakiin Sami zayn iyo Kevin owens ayaa soo bixinayaan Warqada ay u soo saxiixday The commisioner Of Raw Stephanie McMahon oo ah inay yihiin xidigo ka tirsan Raw.
Kurt angle ayaa ka xumaanaya waxa Stephanie McMahon ay samaysay ayna u sheegin isagoo oo ah General manager ka Raw.
Miz aya ku camiranaya kurt angle laakiin kurt ayaa dhahaya sami zayn iyo kevin owens ku soo dhawaada Monday night Raw oo Macsaleemeeya.
Miz oo aadi doona Smack down live kaligiisa oo ah in miz tourage ayna raaci doonin isaga . Laakiin Miz aya Diidaya go’aankaas oo marna ma doonaayo inuu aado smack down live oo uu halkaas joogo Daniel brayan oo ciyaaraha ku soo laabtay oo ah Daniel iyo miz ayaa isku kacsanayeen markay isla joogayn smack down live oo uu miz halkaas joogay.
Sidoo kale kurt angle ayaa shaacinayo ciyaar adag oo ah ciyaarta ugu dambayso miz oo ah Miz, Owen, Zayn, Axel, and Dallas ay wijihi doonan Seth Rollins, Bobby Lashley, Braun Strowman, Finn Bálor iyo qof ku imaanaya shake upka oo smack down live ka imaanaya oo waxa uu qofkaas noqonaya Bobby roode oo noqonaya Raw waxaa ciyaar ku guuleysanaya Miz, Owen, Zayn, Axel, and Dallas will face Seth Rollins, Bobby Lashley, Braun Strowman, Finn Bálor iyo bobby roode.